Engeeg Machine & dayactir Factory, shirkado - Shiinaha engeeg Machine & dayactir-saareyaasha
Toogasho / birta birta ah
Toogashada biraha kaarboon-hooseeya
Dhalida grit alloy
Ahama / silig bir ah oo bir ah oo bir ah
Zinc / Copper / Aluminium xadhig silig ah
Aluminium bunni ah
Machine-engeeg & Qaybo dayactir
Nooca Drum mashiinka qaraxa toogashada
Mashiinka qarxa toogashada suunka ah
Rullaluistemadka Conveyor Shot Machine Qarax
Mashiinka Qarxa Toogashada Tooska ah ee Dusha Sare
Nooca Hanger mashiinka qaraxa toogashada
Qaybaha dayactirka mashiinka
Giraangiraha Dhimista iyo Goynta Cajaladda
Shaagagga shiidi FW-09 taxane
Shaagagga shiidi FW-07 taxane
Goynta taxanaha FS-03
Goynta taxanaha FS-05
Liisaska Macaamiisha caadiga ah
Shot steel Carbon Low
Ahama shot silig cut
Kaarboonka silig jarista siligga
Gawaarida gawaarida gawaarida lagu toogto
Soo dejinta waxaa si toos ah loogu fulin karaa weelal kala duwan ama suunka gaadiidka.Gawaarida gawaarida gawaarida lagu toogtowaxaa loo isticmaalaa in lagu qariyo oo lagu nuujiyo astaamaha, go'yaasha iyo been-abuurka. Iyadoo la adeegsanayo gawaarida gudbinta, nidaamka gawaarida gawaarida waxaa lala xiriirin karaa talaabooyinka shaqsiyeed ee shaqsiga ah, sida qarxinta, ilaalinta, miinshaarista iyo qodista.
Mashiinada Qarxa Toogashada Tooska ah ee Dusha Sare
Mashiinka tareenka dusha sare laga toogtowaxay ku habboon yihiin noocyo badan oo codsiyo ah. Qaybaha shaqada ayaa gacanta lagu dhigaa ama la dhigaa. Nidaamka qaraxu wuxuu ku dhici karaa qaab ku habboon iyadoo la beddelayo jihada wareega iyo wareejinta hangarayaasha marawaxadaha hortooda.
Ku giraangiraha qaraxa inta badan ka kooban xakamaynta qafisyada, garbaha, taarikada ilaalinta, usheeda dhexe, garaacista xawaaraha sare, giraanta suunka, suunka, qalabka adkeeya, iyo mootada sidoo kale saldhigga matoorka iwm
Qalabka mashiinka qarxa oo ay ka mid yihiin: gawaarida gawaarida, gawaarida, kiisaska gawaarida, gawaarida gawaarida, madaxa gawaarida, saxanka waardiyaha, taarikada safka iyo wixii la mid ah.
Nooca Hanger mashiinka qaraxa toogashada waxay ka mid yihiin noocyada ugu dabacsan ee qalabka wax qarxiya. Waxaa loo isticmaalaa in laga gooyo miridhku, miisaanka, ciidda iyo burrsarrada noocyo badan oo qaybo shaqo ah.Nooca Hanger mashiinka qaraxa toogashada sidoo kale waxaa loo isticmaalaa qarxinta dhammaadka ee qaybaha shaqada ee xasaasiga ah ama in la roughen sagxadaha shaqada ee dahaadhka xiga.
Naqshadeynta qarxinta buuq ayaa si ballaaran loo aqbalay inay tahay mid ka mid ah geedi socodka qarxinta ugu wax ku oolka badan ee looga saarayo cabirka, miridhku iyo gubashada qaybaha wax soo saarka ballaaran. Kumashiinka qarxi karaSuunka caagga ah ee aan dhamaadka lahayn ayaa si tartiib tartiib ah u wareegaya qaybaha shaqada isla markaana si isku mid ah ugu bandhigaya durdurrada xoqan dhammaan waqtiga qaraxa.
Gudaha Nooca Drum mashiinka qaraxa toogashada qaybo yar oo shaqo ah ayaa loo qarxiyaa sida alaabada waaweyn. Sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa khadadka wax soo saarka ama qaabeynta keli ahaanta.
No.288 Xarunta Wadada, Mengshui Zhoucun Zibo Shandong Shiinaha